Hill Monkey - Phuket ~ Journey-Assist - Toerana tsara indrindra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Monkey Hill
Tendrombohitra Monkey, Hill Monkey, Phuket
Fampahalalana momba ny Tendrombohitra Monkey any Phuket
Tendrombohitra rajako amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any
Saripika sy horonan-tsary avy amin'ny Monkey Mountain
Hevitra momba ny tendrombohitra Monkey (valin'ny Google)
Ny hevitra momba ny Monkey Mountain (Tripadvisor.ru)
Fampitandremana! Mahazo moka ny gidro
Manoro hevitra ihany koa izahay fa hanaisotra solomaso, satroka sy firavaka alohan'ny hitsidihana anao. Noho izany rehetra izany, ho an'ny fialam-boly dia mety alaim-panahy ny gidro. Raha ny zava-misy dia mety tsy hanambany ny kitapoilinao izy raha misy zavatra manitra fofona avy aminy. 🙂
Tendrombohitra Monkey, Tendrombohitra Monkey amin'ny sarintany
Tendrombohitra rajako. Sary sy horonan-tsary
Ny hevitra momba ny Monkey Mountain (famerenana Google)
Raha tany Azia sambany dia tsy maintsy ilaina ny tendrombohitra Monkey akaikin'ny tanànan'i Phuket. Ny gidro any dia somary sariaka, mahafinaritra ny fomba fijerin'ny tendrombohitra Phuket Town. Ary tena mahafinaritra ny mijery rehefa mifatotra amina karazana karazana bisikileta ny gidro any amin'ny andiany iray somary sariaka.
Amin'ny ankapobeny .. Tsy ratsy ny toerana.